Kulindeleke ukuba avele amadoda asolwa ngokudlwengula ashise ababili | News24
Kulindeleke ukuba avele amadoda asolwa ngokudlwengula ashise ababili
Johannesburg - Kulindeleke ukuba avele eNkantolo yeMantshi yaseKrugersdorp namuhla (ngoLwesithathu) ekuseni amadoda ayisikhombisa ngezinsolo zokudlwengula owesifazane ngaphambi kokumthungela ngomlilo nomngani wakhe.
Kukholakala ukuthi lesi sigameko saqala ngesikhathi umngani eshayiswa yitekisi eKagiso eWest Rand, kwase kuqubuka ingxabano.
OLUNYE UDABA: Kudlwengulwe owesimame kwashaywa indoda kudunwa imoto
Ngemuva kwesikhashana umshayeli wabe esebuya endaweni yesigameko nequlu lamadoda. Kusolwa ukuthi leli qulu lashintshisana ngomunye wesifazane limdlwengula ngaphambi kokubathungela ngomlilo bobabili benomngani wakhe.
Okhulumela amaphoyisa uMathapelo Peters uthe zombili izisulu zashonela esibhedlela.
"Njengamaphoyisa, asihambisani nezigameko zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Silandela yonke imikhondo kanti uma lesi sigameko sihlobene namacala okudlwengulwa kwabantu besifazane ematekisini, kuzoqinisekiswa ukuthi abenzi bokubi bayatholakala."